Ngathi | Izabelo ze-Shanghai Xieyanshi Abrasives Co., Ltd.
I-Shanghai Xieyanshi Abrasives Co., Ltd.yishishini lobuchwephesha elibandakanyekayo kwimveliso, ekusetyenzisweni nasekuthengiseni iimveliso ezirhabaxa. Sazisa izixhobo eziphambili zamanye amazwe, ezinokuvelisa iinkcukacha ezahlukeneyo ze-velcro-backed (hook and loop), PSA (self-adhensive) sanding discs kunye nezinye iimveliso ezirhabaxa ngokweemfuno zabathengi. Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwimveliso yeemoto, ukulungiswa kwemoto kunye nokuhlaziywa, ukwakhiwa kweenqanawa, ukwenziwa kwefanitshala, iimveliso zekhompyuter, impahla kunye namanye amashishini.
Kule minyaka idlulileyo isebe lethu le-R & D lenze uphuhliso olulandelelanayo kwiimveliso zethu kunye nezixhobo ezihlaziyiweyo, kwaye saqokelela amava amaninzi axabisekileyo.Iimveliso zethu zifumene ukwamkelwa okuphezulu kubathengi.Iimpawu zethu "YS" 、 "XYS" 、 "YUQING" abafumananga kakuhle kwimarike yasekhaya, kodwa bafumene kakuhle nakwamanye amazwe nakwimimandla kwihlabathi liphela.
Ukuba yingcali, ukuyila kunye nokusukela ukugqwesa! Ukoneliseka kwabathengi yinto yethu engapheliyo! Iqela lethu lobuchwephesha liya kubambelela kumoya wabathengi kuqala, kwaye sihlale sikulungele ukubonelela ngenkonzo yethu yobungcali, enolwazelelelo kunye nenkxaso yobuchwephesha.
Imbali yoShishino— -
Ngo-2011: Uhanjiswe kumzi-mveliso omtsha
Ngo-2014: yasungula uthuli lwasimahla lweselfowuni eyomileyo
Ngo-2016: qala ishishini lamanye amazwe Tyala umzi-mveliso omtsha, ophuhlisayo kunye nowokwenza abrasives.
Ngo-2018: Kupasile isiqinisekiso se-CE
Ngo-2019: Imveliso eNtsha iphuhlisiwe: iSander
- —inkcubeko yequmrhu— -
Ukuba yingcali, uyilo nokuba usukelo lokugqwesa!
Ukwaneliseka kwabathengi kukusukela kwethu!
Iqela lethu lobungcali liya kubambelela kumoya wabathengi kuqala kwaye bahlala bekulungele ukubonelela abathengi ngobuchule bethu, ngenkonzo enolwazelelelo kunye nenkxaso yezobuchwephesha.
- -R & D Amandla— -
I-XYS yazisa ngezixhobo eziphambili zamanye amazwe kwaye yakha iqela lophando kunye nophuhliso, ngoogqirha, iinkosi kunye neengcali eziphezulu zamanye amazwe kolu shishino.
-Umbeko weMbumba— -
-Umboniso wequmrhu / weFektri— -
-Ukusebenzisana neqabane- -
Imicimbi / Imiboniso— -